WordPress लाई Windows Live Writer | Martech Zone
Windows लाई WordPress लाई WordPress
मंगलवार, जुलाई 26, 2011 आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
केही व्यक्तिहरू केवल वेब आधारित सम्पादन उपकरणहरू प्रयोग गरेर खडा गर्न सक्दैनन् जुन WordPress को साथ अनुप्रयोगहरूको साथ आउँदछ। म तिनीहरूलाई दोष दिँदिन ... मैले छोडिदिएँ रिच एडिटिंग टुल वर्ष पहिले र केवल मेरो ब्लग पोष्टहरूमा आफ्नै HTML लेख्नुहोस्। माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूका लागि अर्को विकल्प छ जुन मैले आज रातमा ग्राहक देखाइरहेको थिएँ, यद्यपि ... विन्डोज लाइभ लेखक.
विन्डोज लाइभ लेखक को लागी केहि बर्ष को लागी गरीएको छ र WordPress को भित्र निर्मित छ एपीआई यसलाई संचार गर्न सक्षम गर्न। तपाईं आफ्नो विषयवस्तु विन्डोज लाइभ लेखकमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले यस्तो देखिन्छ कि तपाईं सीधा आफ्नो ब्लगको दृश्य र अनुभवमा लेख्दै हुनुहुन्छ।
पहिलो चरणले तपाईको ड्राफ्ट र पोष्टहरू इन्टरनेट मार्फत प्रकाशन गर्ने क्षमता स्थापना गर्दैछ। यो WordPress> प्रशासन को सेटिंग्स> लेखन सेक्सनमा पूरा भयो।
अर्को, तपाइँ डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ विन्डोज लाइभ आवश्यक २०११। त्यहाँ केहि धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन लाइभ एसेन्शिअलको साथ पूर्वनिर्धारित रूपमा लोड गर्न सेट हुनेछ ... म सबै वैकल्पिक अनुप्रयोगहरू अनचेक गर्नेछु ताकि तपाईं केवल लाइभ राइटर स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ:
एक पटक स्थापना भएपछि खोल्नुहोस् प्रत्यक्ष लेखक र तपाइँको ब्लगिंग प्लेटफर्म का चयन - इस मामले में WordPress:
अन्तिम चरण भनेको तपाईको ब्लगसँग कनेक्ट हुन। तपाईंले केवल आफ्नो ब्लग यूआरएल टाइप गर्नुपर्नेछ, तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड र यो ठीक जडान हुनुपर्दछ। जब सोधिन्छ, म तपाईको ब्लग थिम डाउनलोड गर्न सिफारिश गर्दछु ताकि तपाईले आफ्नो ब्लग पोष्टहरूमा लेख्दा उनीहरूलाई सच्चा रूपमा प्राप्त होस्।
एक पटक प्रत्यक्ष लेखकले तपाइँको विषयवस्तु र कोटीहरू डाउनलोड गरेपछि तपाइँ जानु राम्रो हुनुपर्दछ!
मेनूबाट तपाईंको ब्लग चयन गरेर र ब्लग पोष्ट थप गरेर यसलाई एउटा परीक्षण दिनुहोस्। त्यसपछि यो ड्राफ्टको रूपमा ब्लगमा पठाउनुहोस्। WordPress मा लगईन गर्नुहोस्, पोष्टहरूमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले त्यहाँ आफ्नो ड्राफ्ट देख्नुपर्नेछ!
टैग: आईफोन subject विषय रेखाआईफोन subject विषय लाइन लम्बाईविन्डोज मोबाइल विषय लाइनविन्डोज मोबाइल विषय लाइन लम्बाई
सामाजिक मिडिया को वास्तविक लागत
समस्या ब्लगिंगमा छ? तदनुसार योजना।
नोभेम्बर २०, २००। 13::2011 अपराह्न
मेरो विन्डोजको लागि सबै कुरा ठीकसँग काम गर्दछ वर्डप्रेसमा लाइभ हुन्छ, जे होस् जब म चित्र राख्छु र ब्लगमा अपलोड गर्छु, वर्डप्रेसमा मैले HTML कोड जस्तो देखिने जस्तो लाग्छ। के तपाइँ यसलाई कसरी तय गर्ने बताउन सक्नुहुन्छ ???
निश्चित छैन के मिलोय - तर यो स enc्केतन समस्या हुन सक्छ। WordPress मा केहि जानकारी छ, यद्यपि: http://codex.wordpress.org/Windows_Live_Writer_Help